MITADIAVA AN-tapitrisany avy amin'ny fifanekena sy ny fombafomba entin'ny governemanta. - World Trade Exchange
Manamboara vola an-tapitrisany dolara amin'ny vola azo avy amin'ny volan'ny governemanta sy ny fifanarahana.
Ny tombony $ 13 Trillion!
Mandehana any amin'izay misy ny vola!
Raha matotra ianao amin'ny fahazoana dolara an-tapitrisany sy hahatratrarana ny fahaleovan-tena ara-bola, dia tokony hiditra amin'ny tontolon'ny fifanarahana sy ny fividianan'ny governemanta ianao.
Satria izany “AIZA VOLA!”
Ny famarotana ho an'ny daholobe eran-tany, ny fividianana entana, serivisy ary asan'ny governemanta sy orinasam-panjakana manerantany amin'ny 2020 dia $ 13 trillion. Ny sandan'ny fifanarahana sy ny fananam-bahoaka tany Etazonia tamin'ny taona 2020 dia $ 1.1 trillion.
Ny sandan'ny fifanarahana sy ny fananam-bolam-panjakana any Etazonia hatramin'ny 30 aprily 2021, dia $ 607.1 miliara, ary ho lasa 1 tapitrisa tapitrisa dolara alohan'ny faran'ity taona ity.
Ny governemanta dia mpividy entana sy serivisy manan-danja ary ireo tsena ireo dia maneho fotoana lehibe ahazoana fidiram-bola marobe.
TSY MAINTSY MANDRAY CONTACT GOVERNEMENT!
Ny fahazoana fifanarahana amin'ny governemanta dia mety hahatonga anao tapitrisa na amina miliara dolara indray alina, fa ny fahazoana fifanarahana amin'ny governemanta dia tsy sombin-tsakafo. Ankoatry ny fifaninanana henjana avy amin'ny orinasa hafa izay manao fividianana fifanarahana mitovy dia tsy maintsy manaraka ny fepetra takiana ianao. Ary koa, ny fahombiazanao taloha, ny lazanao ary ny fahaizanao ara-bola dia tokony horaisina ho ekenao mba hahafahanao mahazo mihintsy.
Misy ny hitsin-dàlana mankany amin'ny fanaovana dolara an-tapitrisany amin'ny fifanarahana sy fividianana governemanta nefa tsy mahazo fifanarahana na dia tsy manam-bola aza ianao, tsy manana traikefa amin'ny maha-mpifanaraka amin'ny governemanta anao, tsy misy mahalala hoe iza ianao, ary na dia mipetraka any anaty lava-bato tsy misy namana, fifandraisana na fifandraisana aza ianao.
hitsin-dàlana ho $ tapitrisa!
Hitsin-dàlana mankany amin'ny fanaovana an-tapitrisany avy amin'ny fifanarahana sy fividianana ataon'ny governemanta TSY MISY HANDRAY CONTACT.
Azonao atao ny mahazo vola dolara an-tapitrisany amin'ny fifanarahana sy fividianana governemanta nefa tsy mahazo fifanarahana amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alikaola amin'ny fifanarahana efa natolotra ny mpiantoka. Midika izany fa azonao atao ny mahazo mpandraharaha handoa vola isan-jato kely amin'ny sanda amin'ny fifanarahan'ny governemanta ho takalon'ny fanampiana azy ireo:
Ahena 95% ny vidin'ny fifanekena sy ny fividianana governemanta.
Ahena 95% ny vidin'ny fanatanterahana ny fifanarahana.
Raha manana fomba azo antoka 100% ianao hampihenana ny vidin'ny fanangonam-bola sy ny fanatanterahana ny fifanarahana hatramin'ny 95%, dia azonao atao ny mametraka ny mpifanaraka amin'ny governemanta milahatra ary mangataka aminao hanome vola anao an-tapitrisany dolara ho an'ny vahaolana!
NAHOANA NY MPANJAKA NY FITONDRANA NY Governemanta no hanome vola an-tapitrisany anao.
Tsy mila faharanitan-tsaina ny hamantatra fa ny masoivohom-panjakana sy ny mpifanaraka dia hazoto handoa anao dolara an-tapitrisany raha afaka manampy amin'ny fampihenana ny vidim-panavotan'izy ireo sy ny fanatanterahana ny fifanarahana amin'ny 95%.
Eritrereto hoe orinasa iray dia nahazo fifanarahana $ 1B handefasana fitaovana fiarovana. Raha afaka manampy ny mpandraharaha hampihena ny fividianana sy ny vidin'ny fanatanterahana ny fifanarahana amin'ny $ 950M izy ireo dia hahazo tombony 950M $. Raha mandoa anao 5% amin'ny tahiry ny orinasa dia hahazo 47.5M $ ianao.
Fifanarahana WIN-WIN ho an'ny rehetra. Manampy ny mpikirakira ianao hitahiry $ 950M amin'ny vidin'ny fanangonam-bola sy ny fanatanterahana ny fifanarahana. Ary manome valisoa anao $ 47.5M izy ireo, izay isan-jato kely amin'ny tahirimbola na tombony azony.
Porofoy fa miasa izy–andramo ity fitsapana tsotra ity:
Alao an-tsaina ange ny manoratra amin'ny tompona (na filoha, na lehiben'ny) orinasa na mpifaninana sasany mampiasa ireto teny ireto:
“Ry malala [Anaran'ny mpandraharaha],
Manana fomba azo antoka 100% aho hampihenana ny vidin'ny fanangonanao sy ny fanatanterahana ny fifanarahana amin'ny 95% raha mitazona ny fenitra, ny kalitao ary ny habetsaky ny fividiananao.
Ny tena tsara dia ny hanaovako ny asa rehetra hanampiana anao hampihena ny vola vidinao sy ny fanatanterahana ny fifanarahana amin'ny 95% nefa tsy misy ezaka, fotoana, risika na fampiasam-bola avy aminao.
Raha liana amin'ny fahazoana tahiry 95% ho an'ny fikambanananao ianao dia miangavy anao hifandray amiko amin'ny fotoana mety indrindra hahitanao bebe kokoa.
Raha nandefa ny hafatra etsy ambony ho an'ny mpandraharaha sasany ianao, ny tombantombana ataoko dia TSY MAINTSY HALF dia maniry ny hahafantatra ny antsipiriany rehetra ary hiresaka aminao noho ny tombontsoa mazava ho azy.
Raha manana orinasa iray nahazo fifanarahana amina miliara dolara ianao ary nahazo izany fampiroboroboana izany - raha lazaina amin'ny teny hafa, dia nomeko anao io tolo-kevitra io - mino aho fa handray andraikitra tsara eo noho eo ny amin'ny hoaviko mampihena ny vidin'ny fanangonanao sy ny fanatanterahana ny fifanekena 95% tsy misy ezaka, fotoana, risika na fampiasam-bola avy aminao.
ahoana no ahafahanao manampy ny mpandraharaha
Mampihena ny vidin'ny 95%?
FOMBA hanampiana ny mpandraharaha hampihena ny vidiny amin'ny 95%.
Azonao atao ny manampy ny mpandraharaha hampihena ny vidin'ny fanangonam-bola sy ny fanatanterahana ny fifanarahana hatramin'ny 95% amin'ny alàlan'ny fahazoana azy ireo vola 95% amin'ny fividianana rehetra ataon'izy ireo amin'ny alàlan'ny 'Offset CashBack.'
INONA NO "CASHBACK OFFSET?"
Ny 'Offset CashBack' dia a WTE serivisy, izay manome fomba azo antoka 100% ho an'ireo orinasa sy mpandraharaha hahazo vola 95% tsy voafetra amin'ny fividianana matetika na amin'ny fiantsenana efa ataon'izy ireo, na aiza na aiza, tsy misy fetra na fetra sokajy.
Ohatra, raha mividy $ 1M ny mpandraharaha iray dia hiverina 95% amin'ny $ 1M izy, izany hoe $ 950,000. Raha mividy $ 100,000,000 ianao dia hiverina 95% amin'ny $ 100M, izay $ 95M. Raha mividy $ 1B ianao, dia hiverina 95% amin'ny $ 1B, izay $ 950M.
Na ny fandanianao isam-bolana dia $ 10M, $ 100M, $ 100B, na mihoatra dia tsy maninona izany. Ianao dia azo antoka 100% hahazo valiny 95% isaky ny fividianana ataonao amin'ny alàlan'ny 'Offset CashBack.'
Marina ny anao an-tsaina fa tsy afaka atao izany. Holazaiko aminao ny fomba anaovanay azy io tsy ho ela. Andao aloha hojerentsika ny tombony azo avy amin'ny famerenam-bola.
Raha mividy fiaramanidina vaovao ianao, yacht lafo vidy, fananana ara-barotra 60 rihana, fotodrafitrasa famokarana (milina, fitaovana, teknolojia, ozinina famokarana iray manontolo, toeram-pitrandrahana, ozinina fanodinana, sns.) Na vokatra na serivisy hafa ankehitriny miaraka amin'ny ' Offset CashBack, 'hiverina 95% amin'ny fandanianao ianao.
Ohatra, raha mividy trano ianao anio miaraka amin'ny 'Offset CashBack', dia hiverina 95% amin'ny fandanianao ianao.
Azonao atao ny mividy izay fananana, vokatra, serivisy ary famatsiana avy amina orinasa an-tapitrisany ary ahazoana valim-bola 95% isaky ny fividianana ataonao. Tsy misy fetra ny sokajin'ny vokatra na serivisy azonao, ary mahazo valiny 95% ianao.
KATEGORIAM-pamokarana sy serivisy
Ny 'Offset CashBack' dia manome valisoa anao amin'ny fiantsenana efa nataonao, na manao ahoana na manao azy. Rehefa mandany vola ianao hividianana fiaramanidina vaovao, yacht lafo vidy, fananana ara-barotra 60 rihana, fotodrafitrasa famokarana (milina, fitaovana, haitao, orinasa mpamokatra iray manontolo, toeram-pitrandrahana, ozinina fanodinam-bidy, sns.) Na vokatra na serivisy hafa, 95% ny vola laninao dia miverina aminao amin'ny maha cashback anao, famporisihana ny “fiantsenana efa nataonao.”
tombontsoa azo avy amin'ny 'Offset CashBack.'
tsy misy fetra na fetra!
Tsy misy fetra amin'ny sokajy vokatra na serivisy: Tsy misy fetra ny sokajin'ny vokatra sy serivisy azonao vidiana amin'ny alàlan'ny WTE Platform CashBack. Mahazo vola mitovy valiny (95%) amin'ny vidin'ny varotra ataonao matetika ianao, na aiza na aiza no miantsena (via WTE), tsy misy fetra, ary tsy manahy momba ny sokajy orinasa.
8. Aloavy izay ilainao: Ny fanesorana ny valisoanao dia mora, ary azonao atao amin'ny fomba maherin'ny 60 isan-karazany ao amin'ny kaontinao. Alao mivantana any amin'ny kaontinao ny volanao.
11. $ 0 sarany isan-taona ho an'ny taona voalohany.
12. Fiarovana amin'ny fividianana: Ny fividianana azo ekena dia takona mandritra ny 120 andro amin'ny fahasimbana, halatra, na "fisarahana an-tsitrapo sy tsy nahy tamin'ny trano."
13. Fiarovana amin'ny Warranty maharitra: Ireo entana azo ekena miaraka amin'ny antoka telo taona na latsaka dia afaka manitatra ireo karama ireo amin'ny taona fanampiny.
15. Fanodinana fahasimbana amin'ny fifanenjehana fiara-miasa: Ny fiaran'ny fiakaranao mendrika dia voarohirohy amin'ny fangalarana sy ny fahasimbana, raha mbola mandà ny fiantoham-pon'ny orinasa manokana ianao. Tsy maintsy mandoa ny hofan-trano rehetra ianao amin'ny alàlan'ny 'Offset CashBack.'
18. Serivisy fanampiana vonjy taitra sy fanampiana vonjy taitra: Antsoy ny nomerao ao ambadiky ny karatra Offset CashBack anao ho an'ny fanampiana vonjy taitra amin'ny karazany maro rehefa mandeha ianao. Ny sarany amin'ny antoko fahatelo dia hampiharina amin'ny serivisy rehetra azo.
19. Priority Pass Select mpikambana: Ny maha-mpikambana dia misy fidirana amin'ireo efitrano fitsinjaram-piaramanidina maherin'ny 1,000 maneran-tany miampy safidy fisakafoanana. Ny tompon-karatra Offset CashBack sy vahiny roa dia afaka miditra maimaim-poana.
25. Concierge 'Offset CashBack': Miantso fanampiana isan-karazany amin'ny fanampiana vonjy taitra, toy ny fanaovana famandrihana fisakafoanana sy ny fitadiavana mombamomba ny dia momba izany.
AHOANA NO AOKA NY KONTRAKTORA HAHAZO BENEFITRA CASHBACK OFFSET ITY?
Ny mpandraharaha dia antenaina hiditra ao WTE maha-mpikambana.
STEP 2: MANAO Fividianana VIA NY WTE Platform.
Ny mpandraharaha dia tsy maintsy manao ny fividianana rehetra amin'ny alàlan'ny WTE Sehatra hahazoana 95% cashback. Ny mpandraharaha dia tsy maintsy manatanteraka ny baikon'ny varotra vokarin'i WTE. Ireo ihany no fepetra ahafahana mankafy ny serivisy 'offset cashback'.
Hahazo ny vola 95% amin'ny alàlan'ny famindrana banky ny mpiantoka. Tsy misy isa, tsy misy tapakila, tsy misy mari-barotra… vola fotsiny ao amin'ny banky!
Tsy miandry ny fanamarinana amin'ny mail intsony. Ny famindrana vola amin'ny banky dia tonga ao amin'ny kaontiny any anaty banky ao anatin'ny 24 ka hatramin'ny 72 ora.
Rehefa mividy amin'ny alàlan'ny WTE Sehatra, hafa WTE ny mpikambana dia manana adidy mitovy amin'ny fividianana avy aminao. Ny mpivarotra dia mpividy ao amin'ny WTE sehatra. WTE manararaotra ny adidin'ny mividy mpikambana hafa hanampiana anao hiteraka fidiram-bola vaovao hanonerana ny fandanianao. Avy eo, haverinay ny 95% amin'ny vola miditra amin'ny CASH azo amin'ny kaonty bankinao ho valisoa cashback. Takiana aminao ny fanatanterahana ireo kaomandy mivarotra vokarinao ho anao. Azo antoka 100% ny valisoa cashback anao satria WTE dia hanao 100% ny asa takiana mba hiteraka fidiram-bola amin'ny anaranao!
Ohatra, raha mividy $ 10,000,000 ianao dia hiverina 95% amin'ny $ 10M, izay $ 9.5M amin'ny endrika fidiram-bola vaovao amin'ny alàlan'ny WTE. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, WTE dia hanampy anao hamokatra $ 10M amin'ny vola miditra amin'ny varotra ary hampihena ny 5% amin'ny vola azo avy amin'ny vidin'ny fifanakalozana. 95% ny vola azo avy amin'ny varotra nateraka ho anao dia hafindra any amin'ny kaontinao. Ity no fomba ahazoana vola 95% ho an'ny orinasanao isaky ny fividianana ataonao WTE.
Na ny fandanianao isam-bolana dia $ 10M, $ 100M, $ 10B, na mihoatra isam-bolana, tsy maninona izany. Azo antoka 100% ianao hanaparitaka ny 95% amin'ny fandanianao amin'ny fidiram-bola vaovao amin'ny fampiasana ny WTE 'Offset CashBack!'
AHOANA NO MANOMBOKANA HANAOM-BOLA VOLA $?
VALINY: INVESTA AO AMIN'NY WTE BUSINESS.
Raha te hanan-karena haingana ianao ary “misotro ronono manankarena” nefa manangona vola am-tapitrisany dolara isam-bolana avy amin'ny mpifanaraka amin'ny governemanta sy ny masoivohon'ny governemanta, dia mila mampiasa vola amin'ny WTE asa ankehitriny.
Rehefa mampiasa vola amin'ny WTE fahazoan-dàlana ara-barotra, hanangana tranokala fandraharahana sy loharanom-pahalalana maro hafa izahay hahafahanao manintona ireo masoivohom-panjakana, mpiantoka ary tompona orinasa te-hampihena ny vidin'izy ireo ary 95% amin'ny alàlan'ny "OFFSET CASHBACK."
LOHA HEVITRA REVENUE:
Mitovy amin'ny WTE manana fahazoan-dàlana amin'ny orinasa, hahazo 50% amin'ny karama ianao amin'ny sehatra telo samihafa amin'ny orinasa:
Sarany isam-bolana / isan-taona: Isam-bolana dia mandoa vola $ 40,000 ka hatramin'ny $ 20M isam-bolana ny mpikambana. Raha tsy izany, ny mpikambana dia afaka mandoa vola isan-taona $ 400,000 ka hatramin'ny $ 200M.
Fividianana fandaharam-potoana amin'ny fividianana fandaharana: Ny mpikambana vaovao dia takiana amin'ny fananana "Fividianana fividianana" vita avy amin'ny talen'ny mpanjifa mahafeno fepetra ary handoa onitra 5% amin'ny fifanakalozana.
Fividianana ny saram-pandaharana: Isaky ny mifanakalo (mivarotra) ny mpikambana dia omena vola 5% ny saram-barotra.
AHOANA NO AZONAO ATAO?
$ 200k hatramin'ny $ 100m isaky ny mpanjifa!
Andao hieritreritra isika fa iray ny mpifanaraka nataonao WTE amin'ny alàlan'ny tranokalanao afaka iray volana. Ka afaka mahazo $ 200,000 ka hatramin'ny $ 100M isam-bolana amin'ny mpikambana iray ianao.
Raha misoratra anarana amin'ny drafitra maha-mpikambana Startup 1 ka hatramin'ny 4 ny mpikambana dia hahazo $ 200,000 ka hatramin'ny $ 800,000 ianao. Raha misoratra anarana amin'ny drafitra maha-mpikambana Premium ny mpikambana dia hahazo $ 1M ianao. Raha misoratra anarana amin'ny drafitra maha-mpikambana an'i Enterprise ny mpikambana dia hahazo $ 2.4M ianao. Raha misoratra anarana amin'ny drafitra maha-mpikambana azy ny mpikambana dia hahazo $ 50M ianao. Farany, raha misoratra anarana amin'ny drafitra maha mpikambana ao amin'ny Global member, dia hahazo $ 100M ianao.
Raha manampy ny mpanjifanao hitahiry $ 1B isika dia hahazo 5% amin'ny $ 1B ho komisiona, izay $ 50M. Ka hahazo 50% amin'ny fidiram-bolantsika $ 50M ianao, izay $ 25M.
Azonao atao ny manao 3 na 4 amin'ireo karazana varotra ireo isam-bolana.
Miaraka amin'ny WTE orinasa, tsy manam-petra ny vola miditra azonao!
tombontsoa hafa an'ny wte raharaham-barotra
WITH wte raharaham-barotra, Azonao atao ny manampy ny orinasa manangona vola an'arivony tapitrisa ary mandoa trosa:
WITH wte raharaham-barotra, Azonao atao ny manampy ny orinasa hanao INDRINDRA:
rehefa mampiasa vola ianao
WEBSITE an'ny orinasanao.
Hanome anao tranokala fandraharahana kilasy eran'izao tontolo izao izahay izay homena marika amin'ny antsipirian'ny orinasanao ary azo alaina amin'ny anaranao. Ny tranokala dia hahafahanao mampiroborobo ny orinasanao amin'ny maha-mpanome 'Offset CashBack', ny trosa sy ny tolotra ara-bola tsy misy zanabola amin'ireo masoivohon'ny governemanta, mpifanaraka ary orinasa hafa manerantany.
$ 2 MILIONA CONSULTATION tsy voafetra mandritra ny iray volana!
Hanana fidirana tsy voafetra ianao WTE Consultants WTE Ny consultants dia manana traikefa am-polony taona niasa niaraka tamin'ny orinasa Fortune 500, ary koa masoivohon'ny governemanta amerikana maromaro ary ireo mpiantoka mpiaro lehibe indrindra toa ny Lockheed Martin Corp., Boeing Co., General Dynamics Corp., Northrop Grumman Corp., Raytheon Co., United Technologies Corp., McKesson Corp., Leidos Holdings Inc., Huntington Ingalls Industries Inc., Harris Corp., Humana Inc., BAE Systems Plc ary maro hafa. Izy ireo dia niasa ho mpanolo-tsaina an'ny UNCTAD, UNESCAP, World Trade Organization (WTO), orinasa iraisam-pirenena, masoivoho iraisam-pirenena, manam-pahefana any amin'ny firenena 100+ ary fikambanana lehibe hafa.
WTE Ireo mpanolotsaina dia hanampy amin'ny fanamorana ny fifandraisanareo amin'ireo masoivohon'ny governemanta, orinasa Fortune 500, mpifanaraka ary tompona orinasa - manoratra aproposal ekena izany isaky ny mandresy fifanarahana amin'ny governemanta, manaova mpandraharaha handoa anao amin'ny vola miverina, mamaha ny olana, mamaly fanontaniana, tadiavo ireo fotoana mety… manampy anao amin'ny fifanarahana lehibe loatra (na sarotra na lafo) mba hiaraha-miasa irery mandritra ny iray volana. Sarany ity serivisy ity $2,000,000 ao amin'ny https://worldtradeexchange.org/phone/, fa ho azonao maimaim-poana izany raha mampiasa vola amin'ity orinasa ity ianao anio. Io serivisy io dia voafetra ho an'ireo olona folo voalohany izay mampiasa vola amin'ity orinasa ity.
ADDRESS 5-STAR OF OFFICE: Hanana biraon'ny orinasa virtoaly 5-kintana ianao amin'ny iray amin'ireo toeram-pivarotana 3,000 manerantany. Ho anao ity WTE toerana misy ny orinasa. Azonao atao ny misafidy toerana rehetra any amin'ny firenena tianao kokoa amin'ny toerana 3,000 manerantany.
NY ISA TELEPHONE DEDICATED ANAO: Hovaliana amin'ny anaran'ny orinasa anao izany ary arakaraka ny torolalana omena anao.
MANDROSO NY MAIL: Ny mail rehetra voaray taminao dia hatolotra anao amin'ny fahazoana azy. Azonay atao ihany koa ny mandefa mailaka entana ho anao mba hahitan'ny mpanjifanao mari-pamantarana avy amin'ny biraonao. Izay antontan-taratasy maika dia azo sokafana, novaina ary alefa imailaka aminao araka ny angatahinao.
Ekipa BUSINESS "vita ho anao".
Ny hany anjaranao dia ny misarika ireo mpandraharaha sy orinasa hisoratra anarana ho an'ny WTE mpikambana ao amin'ny tranonkalanao. Hanana ekipa manam-pahaizana momba ny asa ianao 100% amin'ny asa takiana amin'ny fanampiana ny mpanjifanao hampihena ny vidin'izy ireo ary 95% ny vidin'ny fanatanterahana ny fifanarahana. Hatsipin'izy ireo aza ny vola namboarina tao amin'ny kaontinao any amin'ny kaontinao fa TSY mila mandray telefaona hiresahana amin'ny olona rehetra ianao.
Noho izany, tsy misy fahalalana taloha, tsy misy traikefa teo aloha, tsy fahaizana teknika ary tsy mila fampiasam-bola fanampiny avy aminao hampandeha ity orinasa ity. Manolotra fitantanana, varotra ary fanohanana ara-teknika amin'ny asa aman-draharahanao manontolo 24/7/365 izahay.
Ny ampahany tsara indrindra dia ny hoe tsy handoa ariary akory aza ianao ho an'ity ekipa ity!
talen'ny mpiadidian'ny governemanta.
Lisitry ny lahatahiry manerantany izay manome anao mpamatsy mpifaninana tsy misy farany any amin'ny firenena 100+ izay fanantenana voalohany amin'ny fifanarahana famerenam-bola.
WTE nandinika ny fifanarahana manerana ny masoivohon'ny governemanta amerikana 92 ​​ary nametraka ireo mpiantoka / mpivarotra ambony indrindra amin'ny sandan'ny fifanekena voalohany, tsy voasokajy sns. Diniho ny lisitry ny mpifanaraka amin'ny fanjakana lehibe indrindra.
CONTRAKTORA NY FITONDRANA FEDERAL: Ity lahatahiry ity dia lisitr'ireo mpifanaraka amin'ny governemanta federaly any Etazonia izay manana fepetra takiana amin'ny fifanarahana amin'ny orinasa kely. Ny lahatahiry dia natao ho an'ny olana ara-barotra madinidinika mikatsaka ny hahita fahafaha-manao fifanarahana miaraka amin'ireo mpiantoka voalohany amin'ny governemanta federaly. Ny lahatahiry dia misy ny anarana sy ny toerana misy ny mpivarotra, ny anaran'ny maso ivoho, ny kaody momba ny vokatra / serivisy (PSC) ary ny kaodin'ny American Classification System (NAICS); ny fanjakana no hanaovana ny fifanarahana amin'ny ankapobeny; ny laharan'ny fifanarahana (PIID); ny daty nanombohan'ny fifanarahana sy ny daty nahavitany ary ny sandan'ny fifanekena rehetra.
Award Data Archive dia manasongadina ny antsipiriany rehetra momba ny fividianana masoivoho lehibe, ny mari-pankasitrahana voalohany sy ny firaketana ny loka ary ny angon-drakitra momba ny fifanakalozana nandritra ny taona feno.
ZAVATRA MAROETRA VITA EO ANAO MAHAY $ 5 tapitrisa mahery.
Ity dia fanangonana feno ireo fitaovana marketing natao ho anao izay azonao ampiasaina amin'ny anao WTE raharaham-barotra.
Ity fonosana ity dia tafiditra ao:
Ny doka rehetra efa vonona hampiasaina, tolo-kevitra momba ny fandraharahana, taratasy fivarotana, fampisehoana, dokam-barotra, flyer, doka voasokajy, doka aseho, taratasy mailaka mivantana, carte postales ary famoahana gazety izay ilainao hatrizay, efa vita ho anao.
Ny doka rehetra, ny fampiroboroboana, ny fomba voaporofo, ny paikady azo antoka ary ny fitaovana handresena mpanjifa an'arivony ilainao, efa nomanina, voasoratra, napetraka ary natao ho anao. Hanana fitaovana voaporofo ianao hiantohana ny fahombiazanao ary manomboka manangona vola avy hatrany any amin'izay ilatsahan'ny ankamaroan'ny fotoana sy tsy fahombiazany.
Hanana ny fidirana amin'ny dashboard admin anao ianao, izay manasongadina ny fanadihadihana data momba ny orinasa. Azonao atao ny miditra ao amin'ny dashboard admin amin'ny fotoana rehetra hijerena ny antsipirian'ny lafiny rehetra amin'ny orinasao. Azonao atao ny mijery ny zava-bitan'ny orinasanao amin'ny fotoana tena izy 24/7. Ny motera birao any avaratra dia manome anao fahitana tena izy amin'ny ambaratonga tsirairay amin'ny zava-bitan'ny orinasanao sy ny ekipanao, manomboka amin'ny famintinana ka hatramin'ny antsipiriany, amin'ny alàlan'ny tabilao mifototra amin'ny sehatra ara-bola sy asa mifototra amin'ny asa aman-draharaha sy ny tatitra momba ny orinasanao manontolo amin'ny fotoana tena izy.
Fonosana famaritana CORPORATE.
Hanome anao fonosana famantarana orinasa ho anao izahay WTE orinasa Ity fonosana momba ny orinasa ity dia ahafahanao mampita ny fisianao matihanina eo imason'ny mpanjifanao. Anisan'izany ny karatra fandraharahana, lohan-taratasy ary valopy misy ny mombamomba anao momba izany. Izahay dia hanome anao fonosana iray izay hametraka ny fanatrehanao avy hatrany amin'izay olona sendra anao.
sTRATEGIES, blueprints, ary modely HANOMPOANA fahombiazana WTE BUSINESS.
Handray programa fanofanana feno momba ny lafiny rehetra amin'ny fanombohana sy fiasa mahomby ianao WTE raharaham-barotra.
Hianaranao izao manaraka izao:
Ny rafitra anananay isaky ny dingana amin'ny fampihenana ny vidin'ny fanangonam-bola sy ny fanatanterahana ny fifanarahana amin'ny 95%. Manome anao dingana "tsy misy ati-doha" azonao ampiharina eo no ho eo na dia manomboka hatrany am-boalohany aza - tsipelina tsikelikely, tsipiriany isa-isa (ao anatin'izany ny ohatra, "fomba fiasa" natao ho anao tolo-kevitra, modely amin'ny script, litera ary vahaolana azonao ampiasaina).
Ny paikady 300 miliara dolara amin'ny fananganana tarehimarika 7 hatramin'ny 8 WTE raharaham-barotra.
Fomba voaporofo hisarihana mpanjifa marobe izay handady amin'ny vera vaky ary hangataka hampiasa vola ao aminao WTE asa aman-draharaha ao anatin'ny 6 ora amin'ny vidiny aotra ho anao. Ny fomba sy toerana farany haingana indrindra ahazoana mpanjifa ao anatin'ny 6 ora manomboka ny orinasanao.
Ireo dingana 3 mila 10 minitra isan'andro hanaovana (na amin'ny hariva na amin'ny maraina) ary hanome toky anao hanana vola miditra 7 isa avy amin'ny WTE raharaham-barotra.
Ahoana ny fomba hampifanarahana ireo mpirakitra sy iangaviana anao hangalanao ny volany ho an'ny fifanakalozana cashback offset ao anatin'ny 24 ora!
Ny paikady tsara indrindra hampidirana ireo mpifanaraka amin'ny fanjakana ao aminao WTE orinasa - na dia vaovao amin'ny orinasa aza ianao dia tsy misy mahalala hoe iza ianao, ary mbola tsy nifankahita taminao mihitsy izy ireo, na dia mipetraka any anaty lava-bato tsy misy namana, fifandraisana na fifandraisana amin'ny orinasa aza ianao.
Ahoana ny fomba fiasa mahomby? WTE asa aman-draharaha nefa tsy miresaka na mihaona mifanatrika amin'olona ary tsy mandao ny tranonao na ny birao misy anao.
WTE PACK DOCUMENTATION BUSINESS
Handray antontan-taratasy sy endrika fitantanana, boky torolàlana momba ny varotra, script ohatra, endrika santionany, taratasy ary ireo fitaovam-pitantanana rehetra ilainao hanombohana. Ny masoivoho mpanao dokambarotra sy ny mpanolotsaina momba ny fitantanana orinasa dia handoa vola dolara an-tapitrisany maro anao hamolavola ity compendium ny fitaovana fitantanan-draharaha ity ho anao.
(Ny sandam-bola dia $ 75,000, fa azonao maimaim-poana ao anatin'ity fonosana fandraharahana ity, raha mampiasa vola amin'ny orinasanao napetraka androany ianao)
Ilaina ve ny vola miditra?
Ny dolara an-tapitrisany WTE loharanom-bola ho an'ny orinasa, ny tolotra consultant $ 2M ho azonao amin'ny WTE Mpanolo-tsaina, ny loharanom-bola varotra natao ho anao ho 5M $, ny fitantanana 24/7/365 an'ny orinasanao WTE ekipa orinasa vita ho anao mandritra ny 12 volana, ary loharano hafa izay homenay anao mihoatra ny $ 10M. Ny dolara an-tapitrisany amin'ny vola azonao azonao amin'ny WTE tsy voavidim-bola ny orinasa. Noho izany, fampiasam-bola $ 250,000 ho an'ny WTE ny varotra dia ho varotra tsy mampino ho anao.
Na izany aza, hahazo fihenam-bidy $ 50,000 amin'ny famatsiam-bola ianao alohan'ny hahatongavan'ny timer antsika aotra. Ara-drariny ny fampiasam-bolanao rehetra $200,000 raha mampiasa ny fampiasam-bolanao ianao alohan'ny hitsin'ny countdown eto ambany dia mahatratra ny '0.0.0.0.0.'
Ianao koa dia hahazo andrana 90 andro tsy misy risika an'ny WTE orinasa!
Ity tolotra ity dia azo antoka mandra-pahatongan'ny fotoan'asa ambany ambany ZERO!
NY fampiasam-bolao dia 100% NOMBAHAN'NY 90 ANDRO AZY, GARANTEE-MIVARINA VOLA!
Fampiasam-bola amin'ny WTE ny asa aman-draharaha dia tsy handoa anao na inona na inona, raha tsy mandoa avy hatrany ilay ramanavy mandritra ny fitsarana anao 90 andro tsy misy risika. Tena matotra! Na ny orinasa dia hanapoaka ny sainao sy haneno lakolosy INCOME bebe kokoa noho izay noeritreretinao —- na tsy handoa vola anao akory izany na dia iray aza miorina amin'ny antoka omena vola tsy misy risika 90 andro!
Raha afaka 90 andro ianao dia afaka mijery ny masonay amin'ny taratasy ary milaza aminay fa tsy nahazo vola 100X farafaharatsiny ianao (fiverenan'ny fampiasam-bola 10,000%), dia haverinay am-pifaliana ny volanao
MBOLA HISAKO AZY
MANGATAKA NY WTE raharaham-barotra.
Apetaho amin'ny WTE orinasa amin'ny famenoana ny takelaka etsy ambany. Halefanay aminao ny faktiora ho an'ny WTE sarany fanamboarana busines.
Aloavy ny WTE VOLA FAMPANDROSOANA BUSINESS.
Takiana aminao ny fandoavana ny faktiora amin'ny WTE fananganana orinasa.
WTE HANATSARA NY ANAO WTE asa ao anatin'ny orinasa folo DAYS.
Vantany vao voamarina ny fandoavanao, ny WTE ekipa hanangana ny anao WTE asa aman-draharaha miaraka amin'ireo loharano rehetra voatanisa ao amin'ilay fizarana 'IZAY AZONAO' etsy ambony ao anatin'ny folo andro fiasana. Ankoatr'izay, a WTE Mpanolotsaina dia hampianatra anao ny zavatra rehetra ilainao hanombohana hisarika ny mpanjifa sy hahazo vola amin'ny WTE raharaham-barotra.
Manomboha mahazo vola $ tapitrisa amin'ny orinasanao.
Raha vao ny anao WTE natsangana tanteraka ny orinasa, azonao atao ny miditra ao aminy hanombohana manasa ireo mpandraharaha ary mahazo vola amin'ny orinasa satria manampy ny mpanjifanay hampihena ny vidin'izy ireo sy ny vidin'ny fanatanterahana fifanarahana amin'ny 95% izy ireo.
MANGATAKA NY WTE BUSINESS IZAO!
Te-hisoratra anarana amin'ny WTE Orinasa?